जेरुसलेम समबन्धीत धेरै सोधिएका प्रश्न अनि उत्तरहरु | Hamro Patro
जेरुसलेम समबन्धीत धेरै सोधिएका प्रश्न अनि उत्तरहरु
अमेरिकाले कहिल्यै पनि जेरुसलेममा दुतावास राखेको छैन् । अहिले पनि अमेरिकी दुतावास तेल अबीबमा छ र राजदुत त्यसभन्दा ३० किमी उत्तरमा हर्जलिया पिताउच भन्ने ठाँउमा बस्दछन् । इज्रेलले अमेरिकाको दुतावासका लागि सन् १९८९ मा जेरुसलेममा ९९ बर्षका लागि जग्गाको टुक्रा प्रतिबर्ष केवल १ डलरमा भाडामा लिएको थियो । यो जग्गाको टुक्रा आज २८ बर्षपछि पनि उस्तै छ ।
सन् १९४७ को संयूक्त राष्ट्रसंघीय योजना मुताबिक जेरुसलेमलाई एउटा स्वतन्त्र शहर घोषणा गरिने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसको १ बर्षपछि ईज्रेलको स्वतन्त्रता घोषणा पछि जेरुसलेमको स्वतन्त्र शहरको घोषणा त्यसै तुहिएर गयो र जेरुसलेम शहर बिभाजीत भयो । सन् १९४९ मा हरियो मसीले शहरलाई बिभाजन रेखाले बाँढियो जसलाई अहिलेपनि हरियो लाइन नै भनिन्छ । पश्चिमी भाग इज्रेलको नियन्त्रणमा अनि पूर्वी जोर्डन नियन्त्रणमा । सन् १९६७ को यूद्धमा इज्रेलले पूर्वी जेरुसलेम पनि ६ दिनको यूद्ध पश्चात कब्जा गर्यो । जेरुसलेमलाई अहिले आएर प्यालेसटाइनले आफ्नो भूभाग दावी गर्दछ भने इज्रेलले आफ्नो र यसै घनघोर बैमनस्यता बिच अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रम्पले सन् २०१७ डिसेम्बर ६ मा इज्रेलको राजधानी जेरुसलेम भएको र अब अमेरिकी दुतावास पनि तेल अबीबबाट जेरुसलेममा सार्ने निर्णय समेत गरेका छन् । अब त जेरुसलेमको बिवाद झन चुलीमै पुगेको छ । डिसेम्बर १५ सम्म ५ जना प्यालेस्टाइनी आन्दोलनकारी हरु मारिइसकेका छन भने हजारौ घाइते छन् । सडकमा अमेरिकी निर्णयको बिरुद्ध हजारौं आन्दोलनकारीहरु उत्रिएका छन् । स्तानाबुल, जर्काता, कराँची, शिकागो अनि टोकीयो सम्म यी बिरोध र्याली र प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । यी प्रदर्शन र बिरोधमा अमेरिकी राष्ट्रपती बिरुद्ध नारावाजी हुने गरेका छन भने जेरुसलेम प्यालेस्टाइनको भन्ने नाराहरु पनि सुनिन्छन् ।
डिसेम्बर १४ सन् ०१७ बाट इज्रेलले भयंकर मिसाइल, रकेट, लन्चर आदि हमास आतंककारीको निशानालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर प्रहार गरेको छ ।
लगभग ८ लाख ५० हजार जना जेरुसलेममा बस्दछन् । यिनमा ३७ प्रतिशत अरबी छन् भने ६१ प्रतिशत यहुदी छन् । यी डाटाहरु हामीले इन्डीपेन्डेन्ट थीकं ट्याकं जेरुसलेम इन्सटिट्यूटबाट साभार गरेका हौ । यहुदी जनसख्याँमा करिब २ लाख कडा अर्थोडक्स यहुदीहरु छन भने बाँकी धर्म निरपेक्ष अनि मध्यमधारका यहुदीहरु हुन् । बाँकी अरबी जनसख्याँमा ९४ प्रतिशत मुसलमान र ६ प्रतिशत क्रिस्चियनहरु छन् ।
के आजसम्म कुनै अरु देशको जेरुसलेममा दुतावास थियो ?
सन् १९८० सम्मको इतिहासमा केही देशहरुले दुतावास जेरुसलेममा राखेका थिए तर संयूक्त राष्ट्रसंघले इज्रेललाई पूर्वी जेरुसलेममा अन्तराष्ट्रिय नियमको अपहेलनाको आरोप लगाएपछि जेरुसलेमबाट दुतावासहरु हटाइन थाले । एल साल्भाडोर र कोस्टारीका भने जेरुसलेमबाट सबैभन्दा पछि अर्थात सन् २००६ मा मात्र आफ्ना दुतावास हटाउने देशहरु हुन् । त्यहाँवाट हटेका देशहरुले आफ्ना दुतावास तेलअबीबमा खोलेका हुन् । तेलअबीबमा अहिले ८६ वटा देशका दुतावास छन् भने जेरुसलेममा कुनै पनि देशको दुतावास छैन् ।
ट्रम्प आउनुअघि जेरुसलेम बिषयमा अमेरिका कुन धारमा थियो ?
अमेरिकाले कहिल्यै पनि जेरुसलेममा दुतावास राखेको छैन् । अहिले पनि अमेरिकी दुतावास तेल अबीबमा छ र राजदुत त्यसभन्दा ३० किमी उत्तरमा हर्जलिया पिताउच भन्ने ठाँउमा बस्दछन् ।
इज्रेलले अमेरिकाको दुतावासका लागि सन् १९८९ मा जेरुसलेममा ९९ बर्षका लागि जग्गाको टुक्रा प्रतिबर्ष केवल १ डलरमा भाडामा लिएको थियो । यो जग्गाको टुक्रा आज २८ बर्षपछि पनि उस्तै छ ।
यहुदीका लागि किन महत्वपूर्ण छ जेरुसलेम?
ईशापूर्व ५८६ मा बेबीलोनीयन्सहरुले जेरुसलेम शहरनै ध्वस्त पारेकामा रोमनहरुले पून यस शहर बनाएका हुन् । २००० बर्ष दुशनिकाला भएका यहुदीहरुले हजारौं बर्षसम्म जेरुसलेमलाई पुस्तौंपुस्ताको हृदयमा राखेका हुन्, यस्तै रितले यहुदीहरुको अथक प्रयासले नै सन् १९४८ मा नयाँ यहुदी राष्ट्रका रुपमा इज्रेल घोषणा भएको हो ।
क्रिस्चियनका लागि किन महत्वपूर्ण छ जेरुसलेम?
यता क्रिस्चियनहरुमा पनि बेथलेहम जिससको जन्मथलो हो भने नजारेथमा जिसस हुर्किएका हुन् । लियोनार्दो दा भिन्जील्े चित्रण गर्न खोजेका लास्ट सपर अर्थात अन्तिम रात्रिभोज पनि जिसस पक्राउ पर्न अघि जेरुसलेममै भएको तथ्य छ ।
ईस्लामका लागि किन महत्वपूर्ण छ जेरुसलेम?
जेरुसलेमको बिवाद आजकोे बिश्वको सबैभन्दा ठूलो अनि जोखिमपूर्ण बिवाद हो । अब अमेरिका पनि यस बिवादमा प्रत्यक्ष रुपमा तानिएको छ, अब इज्रेल र प्यालेस्टाइनको जेरुसलेम बिवाद सिमा बाहिर गएको छ । भौगोलिक भन्दा पनि धार्मीक अनि पहिचानको यूद्ध भएको छ ।